नेपाली पब्जी टोली दक्षिण एसिया च्याम्पियन – Talking Sports
नेपाल सुपर लिग अन्तर्गत बिहीबार हुने दोस्रो क्वालिफायर्समा ललितपुर सिटी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स खेल्दै छन् । ललितपुरले वुधबार मात्रै बुटवल लुम्बिनीलाई १-० ले पराजित गर्दै दोस्रो क्वालिफायर्समा स्थान पक्का गरेको थियो ।
ललितपुर सिटीले आफ्नो अघिल्लो खेल खेलेको २४ घण्टा पनि नबित्दै काठमाडौँ रेजर्सको सामना गर्न लागेको हो । काठमाडौँ भने पहिलो प्लेअफमा धनगढी एफसीसँग २-१ ले पराजित हुँदै दोस्रो क्वालिफायर्समा झरेको थियो ।
२४ घण्टा पनि नबित्दै महत्वपूर्ण खेलमा खेलाडी उतार्दा गार्हो हुने ललितपुरका प्रशिक्षक राजु तमाङले बताएका थिए । “हाम्रो बेन्चका खेलाडीहरु पनि राम्रै छन तर लगतारको खेलले केही असार पारे पनि हाम्रो खेलाडीहरुमा आयो लाखे ! जाग्यो लाखे ! भन्ने भावना जागिसकेको छ त्यही भएर पनि खेलाडीहरुले राम्रो खेल्ने आशा लिएको छु,” तमाङले भने ।
यो खेलमा अन्जन बिष्टको खेल हेर्न लायक हुने छ । पछिल्लो दुई खेलमा तीन गोल दुई एसिस्ट दिसकेका अन्जनले यो खेलमा पनि आफ्नो जादु देखाउने हो भने ललितपुरले फाइनलको टिकट पक्का गर्ने छ ।
काठमाडौँका लागि सन्जोक राई घाइते हुनुका कारण पनि केही बेफाईदा अवस्य हुने छ । काठमाडौँका लागि लेफ्ट विङर मेसुके र फर्वार्ड स्टेफेन समिरको खेलले नतिजामा असार ल्याउन सक्ने छ ।